सिभिल लघुवित्तको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन - Aarthiknews
सिभिल लघुवित्तको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले प्रस्ताव गरेको कुल ३ दशमलव ६८ प्रतिशत लाभांश सुरक्षित गर्ने आज (फागुन १९) गते अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीले यस वर्ष ३ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव १८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रस्तावित लाभांश सहित अन्य विविध प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले चैत ५ गते नवौं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । उक्त सभा प्रयोजनका लागि फागुन २० गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने भएकाले फागुन १९ गतेभित्र शेयर कायम गर्नुपर्ने भएको हो ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २३ करोड ३९ लाख ३३ हजार ७०० रहेको छ । सोही पूँजीको आधारमा कम्पनीले रू. ८१ लाख ८७ हजार ६७९ बराबरको बोनस शेयर र रू. ४ लाख ३० हजार ९३० बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्र्रस्ताव गरेको हो । क्लोजको आधारमा फागुन १९ गतेसम्म कायम रहेका शेयरधनीहरु मात्र लाभांशका लागि योग्य हुनेछन् ।
संस्थापक शेयरधनीहरुबाट चुक्ता नभएको शेयर लिलामीमा विक्री गर्दै सारथी नेपाल लघुवित्त
नेशनल माइक्रोफाइनान्सको ५० हजार कित्ता संस्थापक शेयर बैशाख १३ गतेदेखि लिलामीमा
रिलायन्स फाइनान्सको शेयरमूल्य नेप्सेमा समायोजन